Mucaaradka Thailand oo ku guulaystay cod bixinta doorashada Madaxtinimo ee dalkaasi – SBC
Mucaaradka Thailand oo ku guulaystay cod bixinta doorashada Madaxtinimo ee dalkaasi
Gabadha la dhalatay raysal wasaarihii hore ee Thailand Thaksin shinawatra, Yingluck Shinawatra ayaa ku guulaysatay kursiga madaxtinimada dalkaasi,kadib markii xisbigeedu uu kaga awood roonaaday xisbiga Milatariga ee haatan haya talada dalkaasi doorashooyinkii Maalintii shalay ka dhacay dalkaasi.
Yingluck Shinawatra waxaa markii lagu dhawaaqay ku guulaysashada xisbigooda doorashada ay sheegtay in ay aad u faraxsan tahay ayna horyaalaan shaqooyin badan oo aad u adag.
Kuraasta baarlamaanka Thailand ayaa u muuqda in aqlabiyada ay u gacan gashay xisiga Pheu Thai oo ay hogaamiso Yingluck Shinawatra,iyadoona 264 kamid ah kuraasta ay heleen,halka xisbiga Milatariga ee talada hayay uu helay 160 kursi.
Yingluck walaalkeed Thaksin oo afganbi Milatari talada looga qaaday 2006 ayaa haatan ku nool Imaaraadka,waxaana uu sheegay in uu ku faraxsan yahay guusha ay gaareen xisbiga Walaashiis,waxaana uu sheegay xiligan in aanu ku dagdagayn ku laabashada dalkiisa.
Abhisit Vejejiva waxaa uu dhiniiciisa ogolaaday in looga taagroonaaday doorashada,iyadoona uu aqbalay Natiijada kasoo baxday cod bixinta,waxaana uu sheegay in ay la shaqaynayaan dowlada cusub.
Doorashada ka dhacday Thailand waxaa ay soo afjaraysaa isfahamwaa tan iyo sanadkii hore soo dhextaalay Dowlada Milatariga ah iyo dadka kasoo horjeeda,iyadoona haatan Thailand ay u muuqato in ay dib sumcadeedii usoo ceshanayso.